नेपालगन्जका ब्यवसायीको गुनासो : लकडाउन अवधीको घरभाडा कसरी तिर्ने ?
लकडाउनका कारण तीन चार महिना देखी बन्द भएको पसल बल्ल खोलेको छु अब तीन महिनाको घरभाडा कसरी एकै चोटि दिन सकिन्छ ? सुर्खेत रोडमा एउटा सटर भाडामा लिएर नास्ता पसल गर्दै आएकी राधिका रानाको अनुनय घरबेटिले नसुने पछि उनी आफ्ना दुख ग्राहक संग पोख्दै थिइन् ।
उनको जस्तै छेउछाउका पसल गरि बस्नेहरुको पीडा पनि उस्तै थियो । लकडाउन खुले पनि व्यापार छैन । कमाउने समयमा पसल बन्द गर्नु पर्‍यो अहिले पसल खुले पनि ग्राहक आउदैनन । अलिअलि भएको ब्यापारले अहिलेको खर्च धान्न धौधौ छ, त्यसैमा घरबेटीले लकडाउन अवधिको घरभाडा पनि एकमुष्ट मागे पछि तनाव छ । यि उनिहरुको मुखबाट निस्कने दुखका शब्द हुन् ।
सरकारले १२० दिन अघि आव्हान गरेको लकडाउन खोल्यो , ब्यवसायीहरु पसल खोल्न थाले तर ब्यवसाय खोले पनि ब्यापार भने खासै छैन त्यसैमा बैंकको ब्याज र एकमुष्ट तिर्नुपर्ने घरभाडाको चिन्ताले भने पिरोलिएका छन् ।
उता कोभिड १९ कै कारण बाँकेका साना तथा मझौला होटेलहरु समेत बिस्तापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिले होटेल बिक्री गरेर बिस्तापित भैसकेका छन् भने केही बन्द भैसकेका छन् ।
होटेल ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भिमलाल कँडेलका अनुसार बाँकेका दर्जनौं होटेल ब्यवसायी बिस्थापित भएको बताउछन् । बिस्थापित होटेल ब्यवसायिको तथ्यांक तयार पार्न लागिएको बताउने कँडेलले लागत भन्दा कम मुल्यमा कारोबार गर्नु परेको बताउछन् ।
अधिकांश साना तथा मझौला होटेल ब्यवसायी महँगो घरभाडाको मारमा समेत परेका छन् । एकातिर ब्यवसाय छैन भने अर्कोतिर घरबेटीले घरभाडामा छुट दिएका छैनन् कतिपय स्थानमा लकडाउन अवधिको भाडा एकमुष्ट मागे पछि ब्यवसायी झनै चिन्तित बनेको अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
नेपालगन्ज वडा नम्बर १ मा नास्ता पसल गर्दै आएकी सावित्री अधिकारि समेत त्यसैको मारमा परेको बताउछिन् । लकडाउन खुले पछि पुनः लगानी गरेर ब्यवसाय संचालन गर्ने कि ऋण लिएर लकडाउन अवधिको घरभाडा तिर्ने ? हामित मर्कामा छौ , एक त ब्यवसाय छैन कसरी परिवार पाल्ने त्यसैमा पुनः ब्यवसायलाई चलायमान गराउ भन्दा घरबेटीले भाडा मागेर हैरान छ । एकैपटक पुरै घरभाडा तिर्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो हैसियत नै छैन ।
अधिकारीको जस्तै दु:ख र पीडा नेपालगन्जमा ब्यवसायी गर्ने धेरैको पीडा मिल्दोजुल्दो छ । उनीहरु ब्यवसाय ठप्प हुदा जति पीडामा थिए अहिले ब्यवसाय संचालन गर्ने समयमा त्यति नै पिडामा छन् ।
ब्यवसायलाई पुनः गतिमा लिन लगानी आवश्यक छ , अब ब्यवसायमा लगानी जुटाउनै गाह्रो भएको बेला लकडाउन अवधिको घरभाडा एकैचोटि तिर्न कहाँ बाट सक्नु , नेपालगन्ज वडा नम्बर २ मा कपडा पसल गर्दै आएका मन बहादुर केसि बताउछन् ।